5 Indawo entle yePicnic eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eYurophu > 5 Indawo entle yePicnic eYurophu
Uhambo loLoliwe, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Ukuhamba eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/04/2022)
Nokuba ngaba uhamba ngeempelaveki okanye iholide ende eYurophu, uhlala usenza ixesha lokuphumla. Ipikniki yindlela emangalisayo yokuphumla kunye nokuzonwabisa kwezinye iisayithi kunye neembono. ke, ukukunceda uqalise kwiholide yakho yaseYurophu, sithathe ngesandla kwaye sapakisha ibaskiki yepikili yeyona pikiniki intle eYurophu. Hlala nje emva, Ukonwabele umbono!
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku labhalelwa ukufundisa malunga nokuHamba koololiwe kwaye lenziwa ngu Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. Ipiknikiki kwiPetrin Hill, ePrague
Izimvo kunye nomoya ophakathi kweParkin Hill park zenza enye yezi 5 iindawo ezifanelekileyo zepikiniki eYurophu. Ngelishwa, ibekwe kwiDolophu encinci, I-Petrin Hill yipaki eluhlaza kunye nenomtsalane ejonge iPrague castle. UPetrin unikezela ezona mbono zintle zkulu, kwaye unganyukela kwinqaba ejongayo Iimbonakalo ezintle ngokwenene emzini, iinqaba, iibhulorho.
I-Petrin Hill ifanelekile ipikniki eYurophu ngentwasahlobo, ukuwa okanye ihlobo. The leafage will look bothuswa kukuwa kwaye entwasahlobo nasehlotyeni yonke imithi nomhlaba ziya kutyatyamba kwaye zibemibala eluhlaza. Zibambe nje ezinye i-scones nge-berries ezivela Amanqaku Bakubhile kwaye nonke nimiselwe ipikiniki emangalisayo ePrague.
Uyifumana njani indawo eya kuPetrin Hill?
I-Petrin Hill ingaphaya kwe-Old Town kunye nendawo yesixeko. Ungahamba ngokuhlekisa, itram okanye ibhasi, njengabo bonke abakhenkethi. kodwa, ungaya ePeterin Hill ngonyawo, uwele uCharles Bridge kwiMala Strana kunye nodonga lweLennon. Kuya kukuthatha malunga neyure ukuba imozulu intle kwaye ipiknikhi yokutshona kwelanga iya kuba sisiphelo esihle kule mini yamaphupha esixekweni.
2. Ipiknikiya nguMlambo eSaxon Switzerland, Jemani
Imilambo enkulu, Iincopho zekhephu ngaphambili, Amadlelo aluhlaza akujikelezile, ISaxon Switzerland Ipaki yelizwe yiparadesi entle. Ngentsasa yesivila okanye ekupheleni kwe uhambo olude, ibhulorho yase-Bastei yeyona ndawo ifanelekileyo yepikili emangalisayo.
Ukuba ukwindawo yehambo nethambeka elinentaba, ngokuqinisekileyo uyakuxabisa ukuthatha ikhefu lepikniki. Kwelinye icala, ukuba ukhetha ukuhlala obuhle kunye nokuphumla, Ipiknikhi ngasemlanjeni eSaxon Switzerland iya kuba ngaphezulu kwayo yonke iholide yakho yaseYurophu.
Uyifumana njani iSaxon Switzerland?
ISaxon Switzerland kuphela 30 imizuzu 'yokuhamba ngololiwe ukusuka eDresden. ke, Ndipakishe i-Eierschecke, kofu, amajikijolo, kunye neziqhamo ezivela kwimarike yendawo kwaye nonke nimiselwe ixesha elihle kwenye yezona ndawo zintle kakhulu zeepikniki eYurophu.
3. I-picnic NgakuLwandle lwaseLago Di Braies, ElamaTaliyane
Amanzi pristine amanzi aluhlaza kunye neentaba ezibonisa echibini, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. I-Italiya yindawo yasezulwini, zidityaniswe kunye amachibi amangalisayo neentaba, ayinyanzelekanga ukuba ichaze izizathu ezininzi zeli chibi liphezu kwethu 5 eyona ndawo inepikiniki eYurophu.
Ukuba unomdla wokuhamba intaba kwiiDolomites, isekethe ye-lago di yeBraie yosuku-kulula kakhulu. ke, ugqiba usuku oluhle ngendalo, Ukuthatha ukuluma kwiPanini yakho okanye kwi-pizza nasekuncomeni izimvo zeli chibi elikhulu lendalo kwiiDolomites.
Ndiqala Njani ukuya eLago Di Braie?
I-Lago di Braies lukaloliwe wokuhamba kude neBolzano, eyona dolophu ikufuphi. Kuthatha malunga neyure ngololiwe, okanye ungafumana indawo yokuhlala emangalisayo ekufuphi.
IMilan ukuya eVenice ngoLoliwe
IRoma ukuya kwiVenice ngoLoliwe
4. Ipiknikhi kwisiqithi saseMargret, eBudapest
Ifumaneka kumlambo iDanube, phakathi kweBuda nePest, IMargaret Island ilungile kwipikniki yasentwasahlobo eBudapest. Isiqithi esi 2.5 km, intandokazi phakathi kweendawo zalapho zokuzonwabisa ngaphandle elangeni. Ukwengeza, kukho indawo yentengiso ekufutshane, akukho sidingo sokuphatha ipipi yakho uphathe isixeko ngothutho loluntu. Ubamba nje zonke iintandokazi zakho kunye neziselo ezimbalwa zalapha emarikeni kunye nentloko ukuya esiqithini.
Kukho igadi yaseJapan kwisiqithi saseMargaret ekufaneleyo ukutyelelwa ngaphambi okanye emva kwepikiniki yakho entle.
Ndisifumana njani esiQithini saseMargaret?
Ngomkhombe okanye ngebhasi, Isiqithi iMargaret sifikeleleke kakhulu kwizithuthi zikawonkewonke. Ingcebiso yangaphakathi: Ikhadi leBudapest likufumanela ukongezelelwa okhethekileyo kwizithuthi zikawonkewonke kwaye iindawo ezinika umdla zotyelelo.
5. Ipiknikiki kwiChamp De Mars eParis
IParis ayinakubalwa imiyezo emihle kunye neepikniki ecaleni kweSeine. Eyona ndawo inemifanekiso emihle eParis kulungile kwindawo ebonakalayo yeChamps de Mars.
Yindawo entle eluhlaza phakathi kokuhlanganiswa kwesixhenxe ne-Eiffel tower. Ifanelekile ipikniki eParis kwaye inikezela ngezihlalo eziphambili zelanga. Ukongeza kwimeko yomhlaba, ikwayenye ye 10 iimbono ezilungileyo kwi-Eiffel Tower eParis.
Rhoqo ehlotyeni iintsapho zaseParis zafika ukuze zithambise ilanga okanye zonwabise ukuwa kwegadi. Kunokuthula kwaye kunika indawo entle yokujonga izibane zasebusuku ze-Eiffel.
ke, qiniseka ukuba upakisha i-baguette entsha, camembert, iziqhamo ezintsha, isiselo somdiliya, kunye nentloko ukuya kweyona ndawo inepiknikhi eYurophu.
Uyifumana njani iChamp De De Mars Gardens?
Ungathatha uloliwe we-metro okanye u-RER. Mka nje kwisikhululo seChamp de Mars-Tour Eiffel.
Ukuhamba kunokuxakekisa kwaye kungapheli amandla kuba siya kuhlala sifuna ukubona kunye namava apheleleyo kuyo yonke into. I-Yuropa inemisebenzi emininzi emangalisayo kwaye engalibalekiyo kunye nemibono abanokuyinikela. Ngelixa uhlala ulwela ukubona kangangoko kunokwenzeka, ngamanye amaxesha kufuneka uyithathe lula. Ukuba nepikniki ngezidlo zasekhaya yeyona ndlela imnandi yokuhlola ilizwe kunye nokutya, ngaphandle kokwenza inyathelo.
Amsterdam ukuya eParis ngololiwe
ILondon ukuya eParis ngoLoliwe
Ukujikeleza kwakhona ukuya eParis ngololiwe
IBrussels ukuya eParis ngololiwe
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi exabiso eliphantsi ukuya nakweyiphi na indawo entle yepikniki kuluhlu lwethu.
Ngaba uyafuna ukusibetisa iposti yebhlog yethu "I-5 yePicnic Spot eNgcono kakhulu eYurophu" kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://www://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/?lang=xh ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
ipikniki	kwiokpube	PiknicinParis	ipiknikopolis	unokuthelekiswa	ukhenketho	UkutyaPrague	indawo yokuhamba
Uloliwe Travel Holland, Ukuhamba eYurophu